Haweenka iyo Qosyka, 20 January 2019
Haweenka iyo Qosyka
Axad 20 January 2019
DHAGEYSO BARNAAMIJKA HAWEENKA IYO QOYSKA
DHAGEYSO BARNAAMIJKA OO DHAMEYSTIRAN
Qoysaska Soomaalida ee Qaahira
Qoysas badan oo soomaali ah ayaa ku nool magaalada Qaahira kuwaasoo soo dalkaasi dagay xilliyo kala duwan oo badan wixii ka dambeeyay sanadkii 1991-kii.
Haweenka iyo Qoyska: Ololaha Q.M ee 16-ka Maalmood
Barnaamijka Haweenka iyo Qoyska ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadaneynaa ololaha sanadlaha ah ee Qaramada Midoobay ee soconaya 16-ka maalmood ee lagaga horjeedo xadgudubyada jinsiga ku salaysan ee caalamka.
Dumar Sameystay Sanduuq Dhaqaale
Haween ay tiradoodu ku dhow dahay ilaa iyo 150 oo dan yar ah oo ku nool magaalada Beledweyn ee gobolka Hiiraan ayaa sameystay sanduuq dhaqaale oo toddobad kasta maalinta jimacaha ah qofkiiba uu bixinayo $1 oo ay meel dhigtaan
Dhageyso Barnaamijka Haweenka iyo Qoyska. Dec. 05-2018
Dhageyso Barhaamijka Haweenka iyo Qoyska
Haweenka iyo Qoyska: Hooyooyinka Ardayda ah
Amino M Mursaln: Musharrax Madaxweynaha K. Galbeed
Barnaamijka Haweenka iyo Qoyska ee toddobaadkan waxaa marti ku ah wasiirkii hore ee Haweenka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Marwo Aamino Maxmed Mursal.
Hooyooyinka Ardayda ah
Waxaa jira dumar badan oo iyagoo hooyo ah, xaas ah, haddana wax barta si ay u kororsadaan aqoontooda, ugana mira dhaliyaan hadafka ay ku doonayaan inay noqdaan hooyooyin aqoon leh oo wax tara ubadkooda iyo bulshada ay la nool yihiin.
Dhageyso Barnaamijka Haweenka iyo Qoyska oo Dhameystiran